Huawei inotangisa PC isina Intel kana AMD machipisi, uye haizoshandisa Microsoft Windows | Linux Vakapindwa muropa
Huawei inotangisa PC isina Intel kana AMD machipisi, haizoshandisa Microsoft Windows
Iyo indasitiri yePC yakatongwa kubva pakutanga naX86, kunyanya neIntel, uye neMicorosoft ine Windows yayo. Asi izvo zviri kuchinja nguva pfupi yadarika. Mubatanidzwa iwoyo wakazozivikanwa seWintel uri kupera simba zvishoma nezvishoma nekuti dzimwe nzira dzinosvika dziri kuzviita nenzira inovimbisa. Saka Huawei afunga kubva kuIntel, AMD neMicrosoft kuendaboka rako idzva.
El PC ichave iri kutengeswa kuChina, uye inogona kusazobuda imomo kana ivo vangangokurudzirwa kuti vaiwedzere kune dzimwe nyika mune ramangwana. Uye mushure mekuvhotwa kwehurumende yeUS, kubva kuHuawei vakaronga kuvaratidza kuti havadi ivo kuti vagadzire komputa michina
Uye pasinakana kushandisa Microsoft Windows, hapana Intel kana AMD machipisi… Unoshandisa chii? Zvakanaka, kunyange hazvo kumwe kuongorora kwakaona kumwe kushanda uye kuenderana matambudziko (haina kutsigira 32-bit apps) zvichienzaniswa neakajairika maPC, chokwadi ndechekuti ine dhizaini inogona kuve inokwezva munguva pfupi iri kutevera.
Zvechokwadi, Apple iwe unotoziva kuti yatora nzira imwecheteyo mushure mekurambana neIntel. Naizvozvo, haisi yakaipa zano ... Uye kana Apple ikakwanisa kugadzira chip ARM che desktop Nekuita kwakakwana, vamwe vese vanogonawo. Ingo tarisa iwo aripo mapurojekiti eakakwira-kuita machipisi ekunyanyisa akavakirwa paArM
ari PC technical ruzivo yeHuawei ndeaya:
Maboardboard akagadzirwa naHuawei. Kunyanya, ivo vari kushandisa D920S10 bhodhi, iine 6 SATA III madoko, maviri M.2 e solid solid dhiraivha, 2x USB 2.0 uye USB 3.0, Gigabit Ethernet, HDMI.
Kunpeng 920 processor zvichibva pamasere masere eARM pa2.6 Ghz. Iyo chip inogadzirwa mu7nm node.
Memory 16GB RAM Kingston DDR4-2666.
Yeston RX550 GPU.
Dhivha yakaoma SSD 256 GB.
Linux based operating system uye yakagadzirirwa muChina.
Unogona kuona zvimwe zvakawanda Nezve iyi Huawei PC muvhidhiyo yepamutemo iyo yavakaburitsa pane yavo YouTube chiteshi:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Huawei inotangisa PC isina Intel kana AMD machipisi, haizoshandisa Microsoft Windows
Mauricio Martinez akadaro
Pindura Mauricio Martínez
Nhau dzakanaka kwazvo. Inoti haitsigire 32-bit application, neizvozvo zvinoreva kuti inotsigira 64-bit application. Kana iwe uchigona kuisa chero chinoshanda system yaunoda, chero linux distro yaunoda, izvo zvingave zvakanaka
MaChinese haana mvura, tinoziva mashandisiro avanoshandisa
Pindura kuna Pero
Pindura kune rineni
Huawei, mumakore mashoma ichapa zvakawanda zvekutaura nezvazvo. Vashoma vanhu vanoziva kugona kukuru uko Huawei anako, ndoda Trump anonwa doro. Huawei ndiyo yega kambani, pasirese, inokwanisa kuvhura kana kufukidza Android, Windows, Intel, Amd, nezvimwe. Nguva nenguva, makore mashanu kubva zvino tinotaura.
Iyo OS iri 64-bit UOS.
Sezvazviri mune chero liGnux ini ndinofunga vanogona kuisa 32-bit maraibhurari, asi zvinyorwa zvizhinji muWest zvinoita kunge zvakanyorwa nesirogani yekuti "zviite zvakasvibirira" uye kwete izvo zve (e) nvidia, yakakosha iyo netsiye joke.
Izvo zvavanoshaya, for the moment ivo vasiri-asina kuisirwa mapurogiramu epamhepo senge Steam, izvo zvandisingafunge kuti zvinotora nguva yakareba kugadzira vhezheni yemakomputa aya, ayo anokura zvakanyanya kuChina nekuda kwehondo yekutengeserana.
Uye kuMadokero nekuda kwekurumbidzwa kukuru kweApple Hardware svondo rapfuura.
Canonical neGoogle mudiwa kuunza Flutter maapps kuLinux
Tux: inozivikanwa mascot yeLinux uye kushambadzira shure kwayo